Otu Ijeri Dollar maka Youtube? Enwere ike. | Martech Zone
Enwere otutu okwu banyere ọtụtụ ijeri dollar ndị a na-atụle ma na-agafe maka ahịa Youtube, MySpace, Facebook, wdg. Mark Cuban nwere kwuru naanị moron ga-akwụ ihe dị ukwuu maka Youtube. Ekwenyesiri m ike na ọ bụrụ na anyị nwere ike iweghachi oge, ọtụtụ ndị na-eche ga-eche ihe kpatara Mazi Cuban ji nweta ego dịka ọ mere na Dot Com bust. Anụla m ka a kpọrọ ya 'ọgaranya ọghọm' ma eche m na ọ nwere ike dabara. Agụla m ntakịrị blọgụ ya ma ọ dị ka ịgụ MySpace nwatakịrị nwanyị dị afọ iri na abụọ. Ọ sịrị, ọ sịrị, blah, blah, blah.
Ọganihu Dot Com na bust bụ ọdịda dị mkpa nke buliri teknụzụ dị elu yana webụsaịtị akụ na ụba nke ya. Otutu n'ime ego a lara n'iyi bụ naanị maka ịchọta ụdị azụmaahịa dị mma. Agbanyeghị na edozighi ya, usoro azụmaahịa amalitewala.
Abụwo m nnukwu onye na-akatọ 'eyeballs' ma ọ dị ka nke ahụ bụ akụnụba weebụ ọhụrụ a. A naghị azụ Youtube maka ọdịnaya ma ọ bụ teknụzụ - a na-enyocha ya n'ọkwa dị elu n'ihi ọnụ ọgụgụ ndị na-ege ntị nwere. Ọ bụrụ na otu ijeri dollar dị oke maka Youtube, gịnị kpatara ọ ga-eji dị mma maka Ford ka ọ ree obere ijeri ole na ole? Ford anaghị enweta uru ọ bụla… mana onye ọ bụla maara na ọ bara uru. O di nwute, ọ bụrụ na nnukwu ikike isntanetị zụrụ Youtube… ọ na-agbakwunye ọtụtụ 'eyeballs' na akara ha.
A na-akpọ ya Ekekọrịta Ahịa.
Na anyị na-amalite ịhụ mmalite nke Market Share na-ewere ọnọdụ na weebụ. Google, Yahoo! na Microsoft niile na-achọ ma na-azụ ahịa Ekekọrịta. N'ihi ya, ọ bụla saịtị nwere nnukwu ndị na-ege ntị bụ ebumnuche dị ka TV ọ bụla ma ọ bụ ọdụ redio bụ ihe a na-eche mgbe ha nwere ndị na-ege ntị. Agbanyeghi na ego anaghị anọ ugbu a… ndị na - ege ntị ị nwere ike ịzụta taa ga - akwụ ụgwọ na mgbasa ozi ha na - enweta echi. Ọ bụ ụdị ochie ejiri rụọ ọrụ na ụdị mgbasa ozi ndị ọzọ - akwụkwọ akụkọ bụ ezigbo ihe atụ. A na - enweta ego karịa nke ndị debanyere aha na ntinye ego karịa na ndị na - atụ ụtụ.
Amabeghị m n'aka na ụdị azụmaahịa 'ịzụta bọọlụ anya' bụ ezigbo ihe maka ụlọ ọrụ ịntanetị, n'agbanyeghị. Echere m na anyị ga-echere wee hụ.
Ebumnuche, Biko kpọchie Ogbe ọkụkọ